Ubudlelwane | Etimnga 2021
San Francisco Iindawo Zokutyela
Uyifumana njani intombi oyintombazana kwiSikolo esiPhakathi
Ukuqala kwesikolo esiphakathi yinto entsha enomdla. Uya kwenza abahlobo abatsha kwaye udibane namantombazana amaninzi. Mhlawumbi ujonge umntu kwaye uya ...
IiNkqubo zokuDibana kolutsha
Ukuthandana kweeapps kulutsha kwahluke kancinane kwiTinder okanye kwiGrindr. Ngelixa eziapps zingababukeli abancinci kwaye zibonisa umxholo ongacacanga, bayavuma ...
Iingcebiso ngokuDibana kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo
Ubudlelwane kwisikolo samabanga aphakamileyo kunokuba nzima, kodwa ezi ngcebiso kwi ukuthandana kwisikolo esiphakamileyo, uya kuyazi into onokuyilindela ukuze ugcine ulwalamano lwakho ...
Iindlela zokuYila zokuBuza umntu ukuba agoduke
Ngaba unomdla kwiindlela zokuyila zokucela umntu ukuba agoduke? Izimvo ezilungileyo zokugoduka zinokuba ngumceli mngeni, kuba ufuna ukuba yeyentsusa kodwa hayi ngaphezulu kwe ...
Kuthetha ntoni ukuba liGoth Teen?
Ngaphandle kwento abantu abaninzi abakholelwa kuyo, ukuba ngumgadi okwishumi elivisayo ayisiyiyo yonke into malunga nokufa, mnyama kunye ne-eyeliner. Endaweni yoko, yinkcubeko etyebileyo eneengcambu zayo ...
Iimpawu zoMhlobo olungileyo
Ngamanye amaxesha, kunokuba nzima ukubethelela iimpawu ezintle zomhlobo osenyongweni. Ubuhlobo abuhlali bulula kwaye ngamanye amaxesha yeyona nto ilungileyo umhlobo omnye ...
I-Rave yoLutsha kunye noKhuseleko
Imijuxuzo yentsha ingxola, imidaniso yobusuku bonke edla ngokutsala izihlwele naphakathi kwabantu abangama-25 ukuya kuma-25,000. Uninzi lwababekho luphakathi kweminyaka eyi-13-25. Kwi ...
Imiyalezo emnandi engama-50 oyithumelayo
Ungathumela umyalezo obumnandi kuye nakubani na - umama wakho, utata wakho, umhlobo wakho, isoka lakho - nakubani na oneselfowuni. Awuphelelanga ekubathumeleni ...
Indlela Yokuthetha Nabazali Bakho Ngokuthandana
Ukuthandana yenye yezona zinto zibalulekileyo ekunokuba nzima ukuxoxa ngazo nabazali bakho kuba kubandakanya ukusondelelana ngokweemvakalelo kwaye ngamanye amaxesha. Gcina kwi ...
Iingcebiso zoLutsha loKutya
Ukuba neekrisimesi kunokuba yinto entle, eyoyikisayo, eyonwabisayo kunye neyoyikisayo. Xa ufumana okokuqala, unokuziva udidekile malunga nokwenzekayo. ...
Iingcebiso Zokudlala Ngothando Kwabaselula
Ukuba ufuna ukungena kwindawo yokuthandana okanye unethemba lokwenza oko kungekudala, unokuzuza kwiingcebiso zokudlala ngothando kulutsha. Isitshixo kukugcina ...
Iindlela ezoyikekayo zokubuza intombazana okanye umfana
Ukuba ujonga iingcebiso ezimbalwa ngeendlela ezoyikekayo zokubuza intombazana okanye umfana, ingcali yolutsha kunye nombhali u-Annie Fox ugcwele iingcebiso.
Iimpawu zoMhlobo ongalunganga
Ubuhlobo obunetyhefu kunokuba nzima ukububona kwaye bube nzima ngakumbi ukushukumisa. Thatha ixesha lokuvavanya ukuba kuthetha ukuthini ukuba ngumhlobo olungileyo kunye nokuba kuthetha ukuthini ukuba mbi ...
Iimpawu zokuZiphatha kolutsha lwaseKhaya
Ukuba ngumzali kulutsha lwasendle kunokuba yinto enxunguphalisayo, enoxinzelelo kunye namava acelomngeni. Ulutsha lwasendle aluyonto yasimahla kuphela evulekileyo, evulekileyo engqondweni, kunye nokuthatha umngcipheko, kodwa konke ...
Uthando lwaBantu abaselula
I-horoscope yakho inokubonelela ngolonwabo kunye nokukhangela kwikamva lakho lothando. Kukho ii-horoscopes phaya kulutsha oluqikelela ukuba impumelelo iyathandana, ukuba ...
Imibongo yoLutsha lwaBantwana
Enye yezona zinto zibalaseleyo ngokuba ngumntu okwishumi elivisayo ukuthandana nomntu. Imibongo inokunceda ulutsha luvakalise uthando oluziva ngathi. Uthando lunokuba ...
Uthando oluselula kwiminyaka yokufikisa
Njengolutsha, uthando olutsha kukuphazamiseka okuthile. Uthando yimvakalelo edidayo, nokuba ungakanani ngeminyaka. Iminyaka yeshumi elivisayo ihlala izisa amava okuqala ...
Ungafumana phi eyona Mibongo emnandi kuMhlobo oSenyongweni
Kukho intetho ethi umhlobo wokwenene unaphakade, kwaye unokufumana eyona mibongo imnandi yomhlobo osenyongweni obaluleke kakhulu. Imibongo inokuchaza iimvakalelo ...
IiWebhusayithi zeeTshayina eziLutsha
Iiwebhusayithi zamantombazana athandana nabantu abathandana nabasetyhini zinikezela ngendawo yabantu abancinci ukuba bafumane ulwazi ngendlela abaphila ngayo kwaye amaxesha amaninzi indawo ekhuselekileyo yokuncokola kwiiforum zokumodareyitha. Nokuba ...
Ukuqonda iNkanuko eNtsha ngokuchasene nothando
Umnqweno omncinci ngumlilo ovutha ngokunzulu kumbindi wakho. Uva imvakalelo kuwo wonke umzimba wakho, ukubetha kwentliziyo kunye namathambo. Xa umntu ...
indlela yokwenza izihombiso zekrisimesi ezinobuhlalu
usindiso umkhosi ingelosi umthi ubhalisa
usuku lwe tattoo yokakayi efileyo
iindawo zokuthenga amantombazana akwishumi elivisayo
pisces umntu othandana nomhlaza womfazi
Ibhdi Nesidlo Sakusasa